प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण मंगलबारबाट, भ्रमण दलमा को–को छन् ? | Ratopati
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण मंगलबारबाट, भ्रमण दलमा को–को छन् ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको राज्य परिषद्का प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा आगामी असार ५ गते चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका साथ उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य पनि चीन भ्रमणमा जानुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भ्रमणकै सिलसिलामा केही सहमति र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासाको पनि भ्रमण गर्ने जनाइएको छ । त्यहाँ उनले तिब्बतका प्रान्तीय नेताहरुसँग भेटवार्ता समेत गर्ने तालिका रहेको छ ।
यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका एजेन्डा
चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले रेलमार्गदेखि उर्जा सहयोगसम्मका विषयमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । दुई देशबीच ऊर्जा सहयोग तथा समन्वयसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर एजेन्डा छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समझदारीपत्रको मस्यौदालाई पारित गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको पहिलो चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्ने समझदारी भएको थियो । अहिले उक्त सम्झौताको प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।
त्यसैगरी चीन भ्रमणमा तातोपानीस्थित मितेरी पुल र रसुवागढीमा स्याफ्रुबेँसी जोड्ने पुल निर्माणको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता हुनेछ । गल्छी–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाबारे पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा छलफल हुनेछ ।
त्यस्तै ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको रेलमार्ग निर्माणको समझदारी (मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्याडिङ) हुने सम्भावना छ ।
त्यस्तै रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको विषय पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डा छ । केरुङदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गलाई नै काठमाडौंदेखि पोखरा र पोखरादेखि लुम्बिनी जोड्ने सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै नेपाल र चीनबीच लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण प्रत्याभूति सम्झौता (बिप्पा)का विषयमा बिप्पाका विषयमा ठोस समझदारी वा सम्झौता हुने सम्भावना छ । त्यस्तै,दुई देशबीच निजी क्षेत्रबीच ४० अर्बको संयुक्त लगानी सम्झौता हुने जनाइएको छ ।